NAB: Ahoana no nanombohana azy rehetra ... - 2019 NAB Asehoy ny vaovao amin'ny Broadcast Beat. Mpanolotra ofisialin'ny NAB Show, mpamokatra ny NAB Show LIVE
Home » 2017 Kat Show » NAB: Ahoana no nanombohan'ny rehetra?
Eny, eto isika, manatona Kat Show! Hiverina eto indray aho, misolo tena Fampitana Beat Magazine, Tahaka ny hisosana hamakivakiana ny Show Floor, raha nahita ny zavatra hitako amin'ny vokatra rehetra ny vaovao sy ny fanavaozana ao amin'ny Studio (fampitana sy ny lahatsoratra-famokarana) orinasa.
Na dia eo aza ny fientanentanana rehetra izay mitondra ny Show, mandrakizay manontany tena inona no "Kat" dia na iza ny "National Association ny ireo fahitalavitra"Ireo? Ankoatra ny maha-Tompon'ny maro, ny lehibe indrindra Studio orinasa fivoriambe eto an-tany, Kat dia lehibe sy sarotra vatana, ahitana fandaharana fikambanana, mahafaoka na fahitalavitra sy ny onjam-peo, ary ankehitriny aterineto sy ny hafa rehetra endriky ny haino aman-jery fifindran'ny, ary koa ny hafa rehetra orinasa izay manohana azy ireo.
Kat dia multi-faceted izany andro izany, miaraka amin'ny fitaovam-piadiana ny fanolorana avy amin'ny fanabeazana, fikarohana sy ny teknolojia fanavaozana (Kat Labs) ny fisoloana vava (na ny mpanao lalàna sy ny fitsipika draharaha), avy Fitsipika Setting (sy ny Fahitalavitra Code antsoina "Ny Seal ny tsara ho zatra") ho ny Emergency Broadcast System (EBS), avy amin'ny zava-nitranga an-tserasera ny atrikasa sy ny famelabelaran-kevitra sy ny zava-drehetra in-eo. Just miditra ny tranonkala be ianao amin'ny hoe tena mifandray izy ireo, ary tena mitranga izy ireo.
OAY! Haiko tsara? Mahatalanjona anao toa ahy izany, isaky ny mieritreritra ny hahatongavan'ny NAB. Nefa ahoana no nanombohan'izany rehetra izany? Inona avy ireo fanombohana manetry ny NAB ary ahoana no nahatongavan'izy ireo any amin'ny toerana misy azy ireo ankehitriny? Vakio ato, ary manantena aho fa hamaly ireo fanontaniana sy fanontaniana hafa mety ho azonao momba ity fikambanana ity izay tena manan-danja tokoa amin'ny indostrian'ny fampielezam-peo sy studio.
Ny fikambanana nasionalin'ny fampielezam-peo dia efa antitra toy ny fampielezam-peo, ny tenany. Voatendry ao amin'ny 1922 by Eugene F. McDonald, Mpanorina ny Zenith Corporation, Ny NAB dia fikambanam-barotra tsy miankina napetraka mba hanokanana ny filàna iraisan'ny fampielezam-peo. Izy io dia niorina voalohany indrindra mba hametrahana fitsipi-pitondrantena ao amin'ny sehatry ny fampitaovana amin'ny alalan'ny famoronana torolàlana momba ny fizakan-tena (nalaina tamin'ny anarana hoe National Association of Radio Broadcasters), nanova ny anarany ho an'ny Fikambanam-piarahamonin'ny Radio sy Televiziona ao amin'ny 1951, rehefa Nihanona ny Fikambanan'ny Televiziona izy io ary nanova ny anarany ho an'ny Fikambanam-pirahalahiana Nasionaly ao 1958).
Ny governemanta dia tsy manana io "fizakan-tena" io ary noho izany dia niditra tao amin'ilay hetsika mihitsy izy. Ny Communications Act ny 1934 dia nanjary lalàna manankery voalohany amin'ny fitantanana fifandraisana (tariby sy Wireless). Ny fampielezam-peo dia heverina fa ny varotra iraisam-pirenena, izay ny Kongresy no manana fahefana hifehezana ny Lalàm-panorenana Amerikana (Andininy I, Fizarana 8), ary ny hafatra navoaka dia nomena ny fiarovana voalohan'ny Amendment. Ny fampielezam-peo dia nekena ho endrika fifandraisana tokana izay mitaky rafitra hafa mifandraika amin'ny an'ny mpandraharaha toy ny telefaona sy telegrafia. Izany rehetra izany dia nofonosina tamin'ny filôzôfia fa tokony hampiasa ny fahalianana ampahibemaso, ny fahamendrehana ary ny filàna ny fampielezam-peo. Ny hetsika 1934 dia namorona ny FCC, Izay voampanga ho nanao ireo fahitalavitra hahazoana antoka fa ao amin'ny tombontsoam-bahoaka, tsy hanahirana, sy ny ilana.
Tamin'ny May 1, 1955, ahitana mpikambana NARB 1,234 AM (amplitude Fanovaovam-peo)-peo, 327 FM (Ny fivoahan'ny boky Fanovaovam-peo) toby fampielezam-peo sy ny tambajotra 3-pirenena, Columbia Broadcasting System, fiaraha-mientana ifampizarana Broadcasting System, ary National Broadcasting Co., Inc. Ny anoloan'ny fahitalavitra , ny National Association ny Radio sy ny televiziona 267 ireo fahitalavitra nanana fahitalavitra amin'ny maha-mpikambana sy ny fahitalavitra rehetra tambajotra 4-pirenena, American Broadcasting Co., Columbia Broadcasting System, Dumont fahitalavitra Network sy ny National Broadcasting Co., Inc. (Source: Antenimieran-doholona Komitin'ny amin'ny fitsarana, Subcommittee mba hanadihady tanora fandikan-dalàna, Fahitalavitra sy ny tanora fandikan-dalàna, Tatitra vonjimaika, 1955, Komitin'ny Print.)
Araka ny fananganana, ny National Association ny ireo fahitalavitra nampiditra Radio Code in 1929 sy taty aoriana, toy ny teknolojia nanontany, fahitalavitra Code in 1952 (ao amin'ny boky, Leo Bogart nahita fa fahitalavitra Broadcasting lasa haingana eo ambany aegis ny lehibe onjam-peo tambajotra izay vola an-tapitrisa dolara ao ... [ny] orinasa (Bogart, The Age ny Fahitalavitra, P. 9, 1956)).
Na izany aza, ireo fehezan-dalàna roa ireo dia nijanona tao amin'ny 1982 taorian'ny fanenjehana iray avy amin'ny Departemantan'ny Fitsarana izay natsangana ho an'ny adihevitra momba ny haino aman-jery, mamaritra ny fanitsakitsahana ny lalàna Sherman Antitrust (15 USC § 1 (1976)). Ny orinasan'ny orinasam-pifandraisan-davitra dia tsy voatery niditra tao amin'ny NAB na nanaraka ny fehezan-dalàna niorenany, na dia fantatra ho "fenitra amin'ny fampiharana tsara" aza ny FCC, izay tsy nametraka fitsipika ampahibemaso koa any amin'ny faritra voakasik'ireo fehezan-dalàna.
Kat "mandeha ny ramanavy" ho an'ny vahoaka, miezaka foana ara-bakiteny nandefa fitsipika sy ny fitandremana ny zava-drehetra ao fampielezam-peo amin'ny kilaomandy. Tao anatin'ireo taona maro, ny NAB dia nandray anjara tamin'ny hetsi-panoherana marobe, izay matetika niseho tahaka ny amicus curiae, na "namana iray ao amin'ny fitsarana" noho ny fahalianany na ny fijeriny momba ny lohahevitra iray, fa tsy antoko ofisialy ny hetsika . Ny fomba fijerin'izy ireo dia nanampy ny mamolavola ny tontolon'ny lalàna mifandraika amin'ny indostria manontolo (izay ahitana ny fampielezam-peo, ny famokarana lahatsoratra Multimedia sy ny fifandraisan-davitra fitaovana, rindrambaiko, sy ny tolotra).
Ankoatra ny lobbying sy nitondra asa ara-dalàna, Kat manome ny mpikambana ao amin'ny tombontsoa hafa, anisan'izany ny fikarohana trano famakiam-boky misy ny boky iray alina,-tsy tehina izay ahitana manam-pahaizana manokana eo amin'ny siansa sy ny teknolojia sy ny fikarohana sy ny drafitra, ary gazety isam-bolana ny mpikambana ao aminy (Kat World), Ary koa ny boky sy gazety isan-kerinandro RadioWeek ary TV ankehitriny.
Fanampin'izany, NAB dia nanomboka ny NAB Education Foundation, mba hahafahany mampianatra ny olom-pirenena any Etazonia momba ny fitsipiky ny fahalalahana miteny sy lohahevitra hafa momba ny indostria. Ny fototra dia mitarika fikarakarana sy fanabeazana momba ny olana toy ny zo amam-panitsiana voalohany mifandraika amin'ny votoatin'ny programa, hevitra, ary kabary ara-barotra. Ary aoka tsy hohadinoinay ireo fivoriambe isan-taona, izay manintona ireo manam-pahaizana 100,000 ary no loharanon'ny fampahalalam-baovao, tambajotra sy teknolojia any Etazonia!
Ho hitanao ny foiben-toeran'ny NAB (aiza ny toerana hafa) any Washington DC, izay manohy ny famantaranandrony amin'ny onjam-peo sy mitarika ny diabe ho an'ny rariny amin'ny sehatry ny fampielezam-peo. Hatramin'ny volana novambra 1, 2009, ny filoha sady tale jeneralin'ny NAB Gordon H. Smith, Teo aloha United States Senatera avy any Oregon.
Ny NAB no fikambanana mpiaro ny fisoloan-dresaka ho an'ny fampielezam-peo Amerikana, ary manana tantara lava momba ny fandrosoana ny tombontsoa amin'ny radio sy televiziona any Washington, "?? hoy i Gordon H. Smith, filoha lefitra sady CEO. Ny misiônantsika dia efa nijanona ho fanohanana ny fahafahan'ny mpanentana miasa ho an'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana, hanamafy orina ny orinasany ary hanararaotra ireo fahafahana vaovao. Amin'ny alalan'ny Kat Show sy ny fandraisana an-tanana, toy ny Kat Labs, mampirisika ny zava-baovao isika, dia toy izany no mampahery hoavy mamirapiratra ho an'ny orinasa.
Fantaro bebe kokoa momba ny Kat amin'ny alalan'ny fitsidihana ny tranonkala: www.nab.org.
2016 Kat Show 2018 Kat Show fampitana Fampitana Beat Awards Fampitana Beat Magazine fampitana injeniera afa-po Eugene F. MacDonald FCC Gordon Smith History of Kat Las Vegas Kat Kat 2018 Kat Expo Kat Show Las Vegas Kat Show nabshow National Association ny ireo fahitalavitra National Association ny ireo fahitalavitra Show	2019-01-04